Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Sandals Foundation na-akpali olileanya ọhụrụ na Jamaica
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Olile anya na-akpali akpali nke Sandals Foundation
Sandals Foundation kwenyere na omume nke olileanya na-akpali akpali bụ ike nke nwere ike ịkwaga ugwu. Olileanya, n'ụdị ya kachasị mfe, nwere ike kpalie omume na ike ma gbanwee ọgụgụ isi na mmetụta dị mma.
Ntọala ahụ bụ ọgbakọ anaghị akwụ ụgwọ ewepụtara na Machị 2009 iji nyere Sandals Resorts International aka ịga n'ihu na-eme mgbanwe na Caribbean.
Ego niile metụtara nchịkwa na njikwa bụ Sandals International na-akwado.
100% nke dollar ọ bụla enyere na-aga ozugbo iji nweta ego atumatu bara uru na mpaghara isi nke agụmakwụkwọ, obodo na gburugburu ebe obibi.
Enwere ọrụ Sandals Foundation na agwaetiti niile ebe akpụkpọ ụkwụ dị. Taa, anyị na-elekwasị anya n'ihe olileanya kpalitere na Jamaica.
Projects na Jamaica
Akpụkpọ ụkwụ Sandals emejuputala ma kwadoo oru na atumatu nke na-akwado mmepe nke obodo, nkwalite mmemme mmụta na ichekwa gburugburu ebe obibi n'ime Jamaica.
Sandals Foundation na-arụ ọrụ n'ime ime obodo Flanker na ụmụ akwụkwọ 300 na-eji Ụlọikpe Ikpe Ziri Ezi kwa ọnwa. Sandals Foundation webatara mmemme nlekọta na nkwado nke ụlọ akwụkwọ mgbe emechara (ACES) iji hụ na gburugburu ebe nchekwa dị mma, ahaziri nke ndị ntorobịa nọ n'ihe ize ndụ sitere na obodo nwere ike irite uru na ndụmọdụ na nkuzi raara onwe ha nye, nkwado eduzi na ọrụ ụlọ akwụkwọ na ọrụ ha, na itinye aka na ihe omume ehihie a na-ahụ maka ehihie nke na-akwado omume ọha na eze dị mma.
Mmemme Sandals/Flanker Training and Recruitment Tier enyela ọrụ na scholarships, mmemme ahụike kwadoro, ma kwalite nkwalite mmụta mmụta.
Mmemme nlekọta eze na anya dị ukwuu
Kwa afọ, ndepụta ndị ọrụ afọ ofufo na-agụnye ndị dọkịta anya, ndị na-ahụ maka anya, ndị na-ahụ anya, ndị ọkachamara anya, ndị nọọsụ na ndị ọrụ afọ ofufo na-adịghị ahụ anya sitere na United States na Canada isonye na ụlọ ọgwụ na-ewe otu izu mere ka o kwe omume site na mmekorita ya na Sandals Foundation na mpaghara ndị ọzọ. mmekọ.
iCARE sokwa ụlọọgwụ mpaghara Cornwall rụkọọ ọrụ iji rụọ ịwa ahụ cataract iri ise n'efu maka ndị kacha nwee mkpa.
Ọnụ, mmemme nlekọta eze na anya emetụtala ihe karịrị mmadụ 150,000 na Jamaica.
Ebe nsọ mmiri
Sandals Foundation na mmekorita ya na Ministry of Agriculture and Fisheries, na-arụ ọrụ zuru oke ma na-achịkwa ebe nsọ mmiri abụọ na Jamaica - Boscobel na Whitehouse Marine Sanctuary.
Ebe nsọ mmiri na-enyere aka imeziwanye azụ azụ n'ịkụ azụ Jamaica na-ebelata, yana kuziere uru nchekwa ndụ mmiri dị na ihe ndị na-akụ azụ̀ nọ n'ime obodo.
Ụlọ nsọ Boscobel arụ ọrụ nke ọma kemgbe Mee 2013 na mmụba 333% na azụ azụ azụ na 2015. Ebe nsọ mmiri nke Whitehouse arụwo ọrụ nke ọma kemgbe Mee 2015.
Maka ọrụ a ka ọ dịgidere, Sandals Foundation butere ọtụtụ mkpọsa nkuzi maka ndị ọbịa, ndị otu, na ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ka ha ghọta mkpa nchekwa nduru na ọrụ onye ọ bụla na-arụ. Na mgbakwunye, a kụzikwaara ndị otu egwuregwu ihe ha kwesịrị ime mgbe nduru na-atọgbọ akwa n'ime ụlọ ọ bụla nke Sandal ma ọ bụ Beaches Resorts.
Ndị ọbịa nọ na mpaghara Ocho Rios nwere ike isonye na njem nlegharị ebe ha na-enwe ike ịga leta osimiri Gibraltar ma mụta banyere nduru oké osimiri na nduru oké osimiri yana ile anya ka ha na-alaghachi n'oké osimiri.
Sandals Foundations na CARIBSAVE, Coral Restoration Foundation, na ọha enyi enyi na enyi nke Bluefield's Fisherman iji wuo ụlọ nlekọta coral abụọ na Jamaica n'ime ebe nsọ mmiri Bluefield na ebe nsọ mmiri Boscobel. Ọnụ ụlọ ndị a na-elekọta ụmụaka na-eto ihe karịrị 3,000 iberibe coral kwa afọ. Ebe a na-elekọta ụmụaka nke Boscobel coral nke Sandals Foundation na-ahụ maka akụọla ihe karịrị 700 iberibe coral.
Mkpuchi coral na Caribbean agbadala ruo 90%. Coral nurseries na-enyere aka iweghachi mkpuchi coral site na itolite ahụike, coral na-eto ngwa ngwa na na-akụgharị ha azụ n'ime ihe owuwu mmiri. Nke a na-enye aka weta ebe obibi maka ndụ mmiri yana na-enyere aka ichekwa oke osimiri pụọ na mbuze.
Sandals Foundation amalitela ọrụ mkpali mmalite nke akpọrọ Project Sprout. Emebere oru ngo a na nzaghachi mkpa nke ntinye aka n'oge n'ogo nke usoro akwukwo nke ga-egbochi ma obu meziwanye njikere umu akwukwo ezughị oke.
Site na ntinye aka ezubere iche, ogo ndị nkuzi, na nkwalite arụmọrụ, a na-ewusi nkà ịzụ ụmụ ike yana mmemme ndị sitere n'ụlọ akwụkwọ na-arụ ọrụ n'ụlọ, na-akwalite gburugburu mmụta. Sprout na-achọ ụmụ akwụkwọ nọ n'afọ 3-5 ma na-arụsi ọrụ ike na ụlọ akwụkwọ ise: Leanora Morris Basic, Culloden ECI, Seville Golden Pre-School, King's Primary, na Moneague Teachers College Basic School.
Ụlọ akwụkwọ ụmụaka nke West End
Sandals Foundation na mmekorita ya na CHASE Fund ejikọtala aka iji kwado owuwu nke West End Infant School na Negril, Westmoreland. Atụmatụ a bụ ngwaahịa sitere na nkwado Sandals Foundation maka mkpa ụlọ ọrụ na-akwado Education Childhood (ECE).
Ụlọ nke West End Infant School bụ ọrụ nke Ministry of Education (MOE) kwadoro nke na-ekwu maka okwu nkwalite na akụrụngwa, ohere zuru oke na nchekwa ụmụaka na klaasị, yana mkpa maka nkà mmụta mmụta ka mma n'etiti ndị nkuzi mpaghara.
Ụlọ akwụkwọ ụmụntakịrị emechara ga-enye ohere maka ụmụaka dị afọ 3-6 na gburugburu obodo ahụ iji nweta agụmakwụkwọ nwata dị mma na gburugburu ebe mmụta na-akwado.
November 13, 2021 na 14: 36
Dịka onye ode akwụkwọ njem, ọ na-adị m mma maka akpụkpọ ụkwụ na ịmara mbọ enyemaka ha na obodo ọ bụla bụ nke onwe!